Akụrụngwa Ndị na-emepụta ọkọchị na ndị na - emepụta oge ọkọchị - China Auto Summer Products Manufacturers
Car Windshield Eserese na-atọ Sunshade 5901
N'ihu windshashasha ákwà mgbochi maka ụgbọ ala anyanwụ nchebe na mkpuchi mkpuchi anwụ anwụ maka windo azụ nke ụgbọ ala 5901SBT
Multi-oyi akwa nchedo: mma anyanwụ nchedo mmetụta, okpomọkụ mkpuchi ihe, belata okpomọkụ n'ime ụgbọ ala. Mmanụ acomụ imewe, abụọ-oyi akwa aluminum ịse bụ ihe ọzọ okpomọkụ-egbochi ihe, anyanwụ na-àmà na UV-àmà.
Car Window Windo Sunshade 5903
Car n'akụkụ windshield sun shadow, ọkara-echebe anyanwụ ndo, magnet adsorption sun shadow 5903SBT
Ihe mkpuchi anyanwụ na-ekpuchi ọkara anyanwụ na-enweghị imetụta anya nke enyo azụ, na-eme ka ịkwọ ụgbọala dị nchebe. Anyanwụ adịghị mfe iti ihu mmadụ ma zere ịda n ’anwụ.
Ntinye dị oke mfe: magnet dọtara, ntinye ya dịkwa mfe ma dịkwa mfe.
Car Front Window Sunshade with Animal Foto 5006-G
Car sunshade, ụgbọ ala window sunscreen na okpomọkụ ọta, magnetik akpaka retractable ụgbọ ala n'akụkụ window ndo 5006-GSBT
Atọ atọ nke nchedo: mkpuchi ihu igwe + akwa mkpuchi shading + polyester silk dijitalụ obibi oyi akwa, guzogide ọkụ siri ike, na-egbochi ultraviolet ụzarị.
Car Windshield Retractable mkpuchi Sun Shade 5904
Achọpụta ihe mkpuchi ihu anyanwụ, mee ka ụgbọ ahụ dị jụụ, gbochie ụzarị ultraviolet, ihe nchebe anyanwụ, mkpuchi anyanwụ nke ụgbọ ala, nke kwesịrị ekwesị maka ụdị ụgbọ ala dị iche iche
Anyanwụ nchedo na okpomọkụ mkpuchi: Ugboro abụọ n'ụgbụgbọ mmanụ abụ Ọdịdị imewe iche ikuku n'ime na n'èzí; ebili mmiri iji gosipụta ìhè anyanwụ site n'ọtụtụ akụkụ. A na-eji akwa aluminom na-egosipụta oyi akwa dị na mbara igwe, nke nwere ike igosipụta ìhè anyanwụ site n'èzí ụgbọ ala ahụ, wee si otú ahụ belata ọnọdụ okpomọkụ n'ime ụgbọ ala ahụ. , Mgbu ọkụ dị omimi na nchebe UV iji gbochie ịka nká nke akụkụ ime ụgbọala.
Car Windshield Retractable mkpuchi Sun Shade Kwalite ọkpọ 5016
Car sun ndo nche anwụ n'ihu windshield okpomọkụ mkpuchi ihe nche anwụ akpaka retractable ndo nche anwụ 5016SBT
Akpaaka telescopic, ọ dịghị mkpa ịtọsasị, enweghị mgbochi anya, kwalite mmiri iko, ụgbụgbọ mmanụ a doubleụ okpukpu abụọ nke sunshade.
Nchedo UV, mkpuchi okpomọkụ na nchebe anyanwụ, dashboard nchebe, nzuzo na nchebe nzuzo.
Car Side Window Magnetik Sunshade 5006
Magnetik ụgbọ ala sunshade, anyanwụ nchebe na okpomọkụ mkpuchi sunshade, ụgbọ ala sunshade, n'akụkụ window magnetik ụgbọ ala mgbochi retractable 5006SBT
Ntinye ngwa ngwa: Igwe ndọta siri ike na-amịpụta ahụ ahụ, nke dị mfe maka nrụnye ma ghara imetụta windo windo.